10 Things You Should Know Before You Explore South America’s Jungles | Weheliye Online
Maxey madaxda Galmudug u diideen iney wadahadal la galaan kooxda Ahlu Sunna?
Dadaalo lagu xalinayo xiisada u dhexeeysa Galmudug iyo Ahlusunna oo socda iyo ciidamada Huwanta oo u soo Ruqaansaday Guriceel.
DEG DEG: Midowga Musharaxiinta oo laba garab u kala jabay & Dagaalka Ahlu suna oo Khilaaf Abuuray..
DEG DEG, Guriceel oo laga baxay iyo ciidamada dowladda u ruqaansaday.
Next articleShirkii Madaxda dowlad goboleedyadu isugu imaan lahaayeen magaalada Garowe oo sabab la yaab leh u baaqday.
Shariif Sheekh Axmed oo dalbaday in laga wareejiyo hoggaanka Midowga Musharixiinta.